Bogga ugu weyn / blog / 5 Waxyaabood oo Sameeya Qasabad Weyn oo Jikada wax loogu kariyo
2020 / 11 / 08 Qoondayntablog 12647 0
Intooda badan, jikada maahan oo keliya barta wax lagu kariyo. Xaqiiqda dhabta ah, waxaan uga faa'iideysaneynaa jikadaheena kala furfurka, isku darka, fikirka. Jikooyinka hadda jira ayaa lagu daray sidii loo baahnaa in lagu tixgeliyo laylisyo kala duwan. Iyagu hadda waajib kuma aha oo keliya waxyaabaha aan u baahan nahay ee isku-darka iyo dhaqidda weli waxaa u sii dheer TV-yada, muusigga diiradda, armaajo, alaabooyinka la beddeli karo iyo qaar kaloo badan. Jikooyinka ayaa ah kuwa aan caadi ahayn, sida walxaha ay ku qalabaysan yihiin.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira hal shay oo ku dhowaad madbakh kasta oo horumarsan leh. Si joogto ah ayey halkaa u joogtaa, deggan tahay oo aan isla weyneyn. Annagu qaanuun ahaan waanu dhayalsanaynaa xaqiiqadiisa. Si kastaba ha noqotee ma jiraan runtii wax kasta oo kale oo kale oo saameyn weyn ku leh dabeecadda guud ee jikadayada.
Tuunbo midho-dhal leh sida wowow qasabad wuxuu jikada ka dhigayaa mid cajiib ah oo si fiican u shaqeeya. Waxaan jecel nahay inaan kusii nagaano jikada noocan oo kale ah oo aan si isdaba joog ah usoo noqono. Ama markale, si lama filaan ah, markii qasabaddu niyad jab tahay, kuma kari karno jikada si aad u badan.
Waxaan sameeyay cilmi baaris khadka tooska ah, waxaan eegay moodooyinka ugu caansan, waxaan aqriyay muuqaalka sheyga iyo xisaabinta macmiilka, waxaanan helay toddobada waxyaabood ee sameeya qasabad aan caadi ahayn.
Tuubada jikada ee aan caadiga ahayn waxay leedahay sumad
Runtii, anigu ma fahmin sababtee ay tahay in qof waliba u tixgeliyo qasabad aan calaamadeysnayn xulasho. Shakhsiyaadka ma waxay moodayaan inay wax noolaan doonaan? Noqo sida ay dhici karto, taasi sax maahan. Xaqiiqdii way khasaarinayaan. Tubooyinka aan calaamadeysneyn dhaqso ayey u baabi'iyaan. Way jabaan, khiyaaneeyaan, sii daayaan, biyaha qashinka ku shubaan oo milkiilayaashoodu mashquul ku noqdaan oo ay wax ku kharash gareeyaan wanaag.
Kaliya maahan magaca aan bixinayno. Waa ku-tiirsanaan, horumarka ugu cusub ee la fuliyay, taageerada macmiilka oo loo diyaariyey inay gacan ka geysato fursadda ka baxsan ee aan ku dhex galno arrimaha, waxay dammaanad ka qaadaysaa in inta badan qasabadaha ay yihiin nolol. Badbaadi laba dollar oo lumiya kuwan oo dhan. Dhammaan ayaa la dhigay?
Waxaa jira xulashooyin badan oo noocyo iyo sameeyaal sameeya qasabado aad u fiican, aqoon iyo kalsooni leh. Si fudud u dooro mid sida ku cad dhadhankaaga iyo baahiyahaaga. Si fudud u xusuusnow in "Lagu Sameeyay Shiinaha" aysan ahayn magac sumadeed.
Tuubada jikada ee aan caadiga ahayn waxay si fiican ugu shaqeysaa gudaha jikada
Waxyaabaha la tixgeliyey oo dhan, waxaad qiyaasi kartaa aragtidan u baahan doonta inay wax badan hoos uga dhacdo xilliyada ay socdaan. Faa’iidada iyo tayada aan laga leexleexan sow maaha baahiyo aad u badan? Runtii, iyagu waa. Si kastaba ha noqotee, inay ahaato mid la taaban karo oo la isku halleyn karo ayaa hadda ah mid si joogto ah loogu talagalay qasabadaha dhammaan noocyada la tixgelinayo Sidaa darteed qaabeynta ayaa heshay mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee go'aanka gaaraya. Inaan hubino waxyaalo kala duwan, waxaan hadda u adkaysan karnaa inaan aragno qasabadaha indhaha si weyn u furfuran oo tixgelin dheeraad ah u leh muuqaalka.
Qaababku waa kuwo aan dhammaad lahayn. Marka la fiiriyo xaalad aad u xasaasi ah, xaalad kastoo jirta, shan fasal ayaa laga yaabaa in la aqoonsado:
isku darka labada sare
Qaab-dhismeedka mashiinka goynta qaybta ugu badan wuxuu ka kooban yahay wareegyo daran iyo godad ama qaabab u eg qaab madadaalo. Dhismayaasha dhiirrigelinta dabeecadda waxay qaataan dhirta iyo walxaha dabiiciga ka dib. Qasabado aad u yar, ha ahaato sida ay doonto ha noqotee, muuji qaabkaas aan la beddelin. Si joogto ah ayaan ula kulannaa iskudarka labadaas.
Qasabadaha Retro waa joogto joogto ah oo waxaa loo isticmaalaa jikooyinka style xilli halka kuwa hal-abuurka waxaa la siiyaa isku dar ah lama filaan ah ilo, dabinno iyo xamuulka astaamo kale geesinimo iyo frill. Labadoodu waxay u baahan yihiin jikada qaabka la xidhiidha oo si weyn uga yar dhammaan adeegsiga loo dhan yahay marka loo eego moodooyinka toosan ee toosan.
Tuubada jikada ee cajiibka ahi waa wax uun laakiin ay adagtahay in la soo bandhigo lana shaqeeyo
Aasaasintu ma ahan inay qaadato 10 daqiiqo shaqsi leh awood DIY muhiim ah, baabi'inta qasabaddii hore ee laga reebay. Asal ahaan, waxay ka heleysaa tuubbooyinka marinka godka godka ama darbiga, iyadoo la daryeelayo qasabada, iyada oo hoosta lagu xirayo iyadoo la marsiinayo lowska (ama lowska) iyo isku xirka qaybaha gorgortanka ilaa saad biyo qabow iyo qabow. . Si joogto ah looma ciyaaro ciyaar lagu hagaajinayo, goomayaasha laastikada ah iyo waxyaabo u dhigma maaddaama ururradu xilligan yihiin kuwo biyo diid ah sida ay u muuqdaan.
Gacanku wuxuu wax ka beddelaa heerkulka iyo tayada durdurka si fudud oo hubaal ah. Waxaa macquul ah in la isku duwo durdurka meel walba oo saxanka ah iyo xitaa wixii la soo dhaafay.
Tuubbooyinka leh madaxa kala firdhinta tuubbada ayaa ku siibanaysa iyada oo aan lagu dedaalayn. Ma la xiriiri karto jirka qasabadda gudaheeda oo si wax ku ool ah ayey u mareysaa jahaynta lagu soo rogay tuubada. Madaxa firidhku wuxuu dib ugulaabanayaa kalsooni, waligeedna ma jiri doonto rabitaankiisa inuu xor ahaado. Qaar ka mid ah moodooyinka qasabada ayaa xitaa adeegsada birlab adag si ay u qabtaan madaxa buufin ee la dejiyay.
Tuubbooyinka hoos loo jiido waxay caadi ahaan isticmaalaan guga ka dhigaya inay dib ugu noqdaan ku-hayaha markii lala soo baxo. Qasabadaha wanaagsan, madaxa qubeyska ayaa guud ahaan dib ugu laaban doona qofka haysta isagoon bini'aadamku isku dubbarideyn.
Baaxadda leexashadu waa ku filan tahay si loo kala furfuro meesha gaarka ah ee aad u baahan tahay inay ahaato.
Tuubada jikada ee cajiibka ah lama sii deyn karo inta uu nool yahay
Ganacsiga meheradaha dharka lagu beddelo iyo goomayaasha ayaa leh meel la soo dhaafay. Farsamooyinka ayaa horay u maray. Wareegyo adag oo la shiday, oo hadda iyo mar labaad lagu hubiyay dhagax qaali ah, ayaa qasabadaha ka dhigaya dhammaan ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka ay adagtahay in la xiro. Ma sii daayaan inta ay nool yihiin oo dhan, oo wax qabadku wuxuu beddelaa heerkulka iyo durdurrada.
Tuubbada jikada ee aan caadiga ahayn waxay leedahay xorriyad u oggolaanaysa xitaa dheriyada iyo weelka ugu waaweyn inay hoos galaan
Marka laga baxo fursadda ah in qasabaddu ay hooseyso, runtii macnaheedu maahan inay tahay wax laga naxo. Ku tiirsanaanta waxtarka leh ee saxanka waxaa laga yaabaa inaad weli diyaar u tahay inaad dhigto dheriyo aad u waaweyn hoostiisa oo aad maydho. Ha ahaato siday doonto ha noqotee, culeyska cufnaanta ee qasabadda awgeed, waxaad u baahan kartaa inaad ka saarto jidkaaga waqti ka waqti. Ma ahan heshiis halis ah, waan isku raacsanahay. Noqo sida ay noqon karto, maadaama aad hada tahay ka dib tuubbo aan caadi ahayn, waxaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay inaad hesho sheyga jikada ugu weyn ee lagu dhaqi doono tuubadan, isla markaana cabbiro sida ay u sarreeyaan qallooca tuubada si ay kuu oggolaato fursadda horumarka dhacdo kasta, markaad maydho waxyaalahaas waaweyn.
Sikastaba xaalku ha ahaado, iska jir inaadan buun buunin. Sida xaaladaha oo dhan, caqli galku waa la taliye hufan oo intaa dheer halkan. Haddii aad fursad u haysatid inaad, tusaale ahaan, haysatid hal shey oo cabbirkiisu aad u weyn yahay oo waxyaalaha kala duwan ay aad u yar yihiin, inaad tuubbo ka qaadatid cabbirka saxanka waxay noqon kartaa xad-dhaaf aan loo baahnayn.
Hore:: Waxa La Sameeyo Markaad Iibsaneyso Qasabada Jikada Next: Waa maxay sababta qasabadda saxan ee jikada u sameysaa farqi
2021 / 04 / 22 3237
2021 / 04 / 21 4193